अत्यावश्यक वस्तुको पसल नियमित सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > अत्यावश्यक वस्तुको पसल नियमित सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन
अत्यावश्यक वस्तुको पसल नियमित सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण तथा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास)का पसल नियमित सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि पसलमा भीड नगर्न र सुरक्षित रही कम्तीमा १ मिटरको दूरी राखी लाइनमा बस्न समेत आग्रह गरेको छ ।
मंगलवारदेखि सुरू भएको देशव्यापी लकडाउनका कारण खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री, खाना पकाउने ग्यास लगायत अत्यावश्यक वस्तुका पसल बन्द भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्ता पसल नियमित सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले औषधि, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध पानीलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री बोक्ने ढुवानीका सवारी सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
पसलमा काम गर्ने सबैलाई अनिवार्य मास्क लगाउन र समयसमयमा स्यानिटाइजर र साबुनपानीले हात धुन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । यसका लागि ढुवानीकर्ता एवं विक्रेता कम्पनीले मास्क, स्यानिटाइजर लगायत सुरक्षा सामग्रीको सुविधासहित मजदूरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
२०७६ चैत्र १२ गते ०६:५४ मा प्रकाशित
कोरोना उपचार कोषमा एनसेलको १० करोड योगदान
भैँसी बेचेर कहिलेसम्म उपचार गरूँ सरकार ?
सरकारी अनुदानपछि धान फल्ने खेत मासिँदै, के गर्दैछन् किसान ?
पर्यटन समितिले नगरकोटको फोहर व्यवस्थापन गर्ने
२६ करोड नाफा कमाएको बैंकले १५ प्रतिशत सेयर ल्याउँदै !
राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग्यो प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त